ဟိုပုံးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖလား အသက် ၂၁ နှစ်အောက် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ - Kanbawza Tai News
Home ရှမျးတောငျသတငျးမြား ဟိုပုံး အားကစား ဟိုပုံးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖလား အသက် ၂၁ နှစ်အောက် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ
ဟိုပုံးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖလား အသက် ၂၁ နှစ်အောက် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ
July 30, 2019 ရှမျးတောငျသတငျးမြား, ဟိုပုံး, အားကစား,
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖလား အသက် ၂၁ နှစ်အောက် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကို ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်၊ ညနေပိုင်းက ဟိုပုံးမြို့နယ် အားကစားကွင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရွက်ပုန်းသီးလူငယ် မျိုးဆက်သစ်အားကစားသမားများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်၊ နိုင်ငံတော်၏ အားကစား အဆင့်အတန်းတိုးတက်မြင့်မားရန်နှင့် မိမိမြို့နယ်ဂုဏ်၊ မိမိဒေသဂုဏ် ဆောင်နိုင်မည့် အားကစား သမားများ ပေါ်ထွက်လာစေရန်ရည်ရွယ်၍ အဆိုပါ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲတွင် ဟိုပုံးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က "ယခုဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာ အားကစားသမားများအနေနဲ့ အားကစားသမား စိတ်ဓာတ်အရင်းခံပြီး၊ ဒိုင်လူကြီးများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နာခံကြရန်၊ သတ်မှတ်ထားသော ဥပဒေဘောင်စည်းမျဉ်းများအရ သန့်ရှင်းစွာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားကြရန်၊ မြို့နယ်အဆင့်မှ ခရိုင်၊ ခရိုင် အဆင့်မှ ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အဆင့်မှ နိုင်ငံ့လက်ရွေးစင်အထိ တက်လှမ်းနိုင်ရေး ရည်မှန်းချက်ထားကာ အားသွန်ခွန်စိုက် ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားကြရန်" အမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အတူ ဟိုပုံးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးနန်းတင့်ကလည်း "ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီ၊ ကွင်းပြင်ဆင်ရေးကော်မတီ၊ ပြန်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေးကော်မတီ၊ လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ တို့ဖွဲ့စည်းကာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း ခွဲဝေပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အားကစားထူးချွန်စေရန် ဘက်ပေါင်းစုံ အရည်အသွေးပြည့်မှီရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ပြည်သူများ၏ အားပေးမှု၊ အားကစားဝါသနာရှင်များ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုတို့အပြင် အဓိကကျသည့် အားကစားသမားများနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်သူများ၏ ခံယူချက်မှန်ကန်ရန်နှင့် ဇွဲ၊စိတ်ဓာတ်ကို အရင်းခံပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှု ထက်မြက်ရန် အထူးလိုအပ်ကြောင်း" ပြောကြားသည်။
"နိုင်ငံတော်ကလည်း မြန်မာ့ဘောလုံးအဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် မြို့နယ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး၊ အသက်(၁၃)နှစ်အောက်၊ အသက်(၁၅)နှစ်အောက်နဲ့ အသက်(၁၇)နှစ်အောက် ဘောလုံးအသင်း တွေမှာ လူငယ်လက်ရွေးစင်များ ရွေးချယ်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်" ဟု ဟိုပုံး မြို့နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဒေါ်နန္ဒာလှိုင်က ပြောသည်။
အဆိုပါ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် ဟိုပုံးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများမှ ဘောလုံးအသင်း စုစုပေါင်း ၃၁ သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကစားလျက်ရှိပြီး ပထမဆုရရှိသော အသင်းကို ငွေကျပ် ၈ သိန်း၊ ဒုတိယဆုရ အသင်းကို ကျပ် ၅ သိန်း နှင့် နေရာအလိုက် အကောင်းဆုံး အားကစားသမားဆုများကိုလည်း ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အသက်(၂၁)နှစ်အောက် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာပေါင်းစုံ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲသို့ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခွန်မောင်ဖြူ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးနန်းတင့်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ကျန်းမာရေး၊ကြက်ခြေနီ၊ ပြိုင်ပွဲဝင် အားကစားသမားများ၊ အားကစားဝါသနာရှင်များနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကာ၊ ဖွင့်ပွဲအခမ်း အနားတွင် ဟိုပုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် အမှတ်(၂)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ များတို့်က အာရှမြန်မာ တေးသီချင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အမှတ်(၂)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းမှ ဘင်ခရာတပ်ဖွဲ့ မှ သရုပ်ပြ ကပြဖျော်ဖြေပေးသွားပြီး၊ ကပြဖျော်ဖြေသွားသည့် အဖွဲ့များအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနန်းတင့်က ဂုဏ်ပြု လက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြိုင်ပွဲတွင် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ဘောလုံးများ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ပွဲစဉ်(၁)အဖြစ်လွယ်အွန့်ကျေးရွာအုပ်စုဘောလုံးအသင်းနှင့် တောင်ရပ်ကွက် (၂) ဘောလုံးအသင်းတို့ ယဉ်ပြိုင်ကစားကြရာ တောင်ရပ်ကွက်(၂)ဘောလုံး အသင်းက လွယ်အွန့်ကျေးရွာအုပ်စုဘောလုံးအသင်းကို ၃ ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဟိုပုံးမြို့နယ်မှ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဂိုးသမား မြဖူးငုံ၊ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် (U-19) ပြိုင်ပွဲ Shan United ဘောလုံးအသင်းတွင် ခွန်အောင်နိုင်၊ မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်လက်ရွေးစင် ခွန်ဝင်းဗိုလ်နှင့် စိုင်းဇွဲဆက် ၊ (U-15) အမျိုးသမီးမြန်မာ့လက်ရွေးစင် နန်းချိုမွေး၊ (U-13) ရှမ်း/တောင် အမျိုးသမီးအသင်းတွင် နန်းအောင်ဖူးတို့ကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဟိုပုံးမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးဖလား အသကျ ၂၁ နှဈအောကျ ရပျကှကျ/ကြေးရှာပေါငျးစုံ ဘောလုံးပွိုငျပှဲ ကငျြးပ
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး၊ ပအိုဝျးကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ၊ ဟိုပုံးမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးဖလား အသကျ ၂၁ နှဈအောကျ ရပျကှကျ/ကြေးရှာပေါငျးစုံ ဘောလုံးပွိုငျပှဲ ဖှငျ့ပှဲကို ဇူလိုငျလ ၂၉ ရကျ၊ ညနပေိုငျးက ဟိုပုံးမွို့နယျ အားကစားကှငျးတှငျ ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
မွို့နယျအတှငျးရှိ ရှကျပုနျးသီးလူငယျ မြိုးဆကျသဈအားကစားသမားမြား ပျေါထှနျးလာစရေနျ၊ နိုငျငံတျော၏ အားကစား အဆငျ့အတနျးတိုးတကျမွငျ့မားရနျနှငျ့ မိမိမွို့နယျဂုဏျ၊ မိမိဒသေဂုဏျ ဆောငျနိုငျမညျ့ အားကစား သမားမြား ပျေါထှကျလာစရေနျရညျရှယျ၍ အဆိုပါ ဘောလုံးပွိုငျပှဲကို ကငျြးပပွုလုပျရခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ဘောလုံးပွိုငျပှဲ ဖှငျ့ပှဲတှငျ ဟိုပုံးမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၁) မှ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျက "ယခုဘောလုံးပွိုငျပှဲမှာ အားကစားသမားမြားအနနေဲ့ အားကစားသမား စိတျဓာတျအရငျးခံပွီး၊ ဒိုငျလူကွီးမြားရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြကို နာခံကွရနျ၊ သတျမှတျထားသော ဥပဒဘေောငျစညျးမဉျြးမြားအရ သနျ့ရှငျးစှာ ယှဉျပွိုငျကစားသှားကွရနျ၊ မွို့နယျအဆငျ့မှ ခရိုငျ၊ ခရိုငျ အဆငျ့မှ ပွညျနယျ၊ ပွညျနယျအဆငျ့မှ နိုငျငံ့လကျရှေးစငျအထိ တကျလှမျးနိုငျရေး ရညျမှနျးခကျြထားကာ အားသှနျခှနျစိုကျ ယှဉျပွိုငျကစားသှားကွရနျ" အမှာစကား ပွောကွားခဲ့သညျ။
ထို့အတူ ဟိုပုံးမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးနနျးတငျ့ကလညျး "ပွိုငျပှဲကငျြးပရေးကျောမတီ၊ ကှငျးပွငျဆငျရေးကျောမတီ၊ ပွနျကွားရေးဆပျကျောမတီ၊ ကနျြးမာရေးကျောမတီ၊ လုံခွုံရေးနှငျ့ စညျးကမျးထိနျးသိမျးရေး ဆပျကျောမတီ တို့ဖှဲ့စညျးကာ လုပျငနျးတာဝနျမြားကိုလညျး ခှဲဝပေေးထားပွီးဖွဈကွောငျး၊ အားကစားထူးခြှနျစရေနျ ဘကျပေါငျးစုံ အရညျအသှေးပွညျ့မှီရနျ လိုအပျကွောငျး၊ ပွညျသူမြား၏ အားပေးမှု၊ အားကစားဝါသနာရှငျမြား၏ ကူညီထောကျပံ့မှုတို့အပွငျ အဓိကကသြညျ့ အားကစားသမားမြားနှငျ့ စီမံအုပျခြုပျသူမြား၏ ခံယူခကျြမှနျကနျရနျနှငျ့ ဇှဲ၊စိတျဓာတျကို အရငျးခံပွီးကွိုးစားအားထုတျမှု ထကျမွကျရနျ အထူးလိုအပျကွောငျး" ပွောကွားသညျ။
"နိုငျငံတျောကလညျး မွနျမာ့ဘောလုံးအဆငျ့အတနျး တိုးတကျမွငျ့မားရေးအတှကျ မွို့နယျဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျမြားကို ဖှဲ့စညျးပေးခဲ့ပွီး၊ အသကျ(၁၃)နှဈအောကျ၊ အသကျ(၁၅)နှဈအောကျနဲ့ အသကျ(၁၇)နှဈအောကျ ဘောလုံးအသငျး တှမှော လူငယျလကျရှေးစငျမြား ရှေးခယျြပွီး တဈနှဈပတျလုံး စဉျဆကျမပွတျလကေ့ငျြ့ပေးလကျြရှိပါတယျ" ဟု ဟိုပုံး မွို့နယျအားကစားနှငျ့ ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ မွို့နယျဦးစီးမှူး ဒျေါနန်ဒာလှိုငျက ပွောသညျ။
အဆိုပါ ဘောလုံးပွိုငျပှဲတှငျ ဟိုပုံးမွို့နယျအတှငျးရှိ ရပျကှကျနှငျ့ ကြေးရှာမြားမှ ဘောလုံးအသငျး စုစုပေါငျး ၃၁ သငျး ပါဝငျယှဉျပွိုငျကစားလကျြရှိပွီး ပထမဆုရရှိသော အသငျးကို ငှကေပျြ ၈ သိနျး၊ ဒုတိယဆုရ အသငျးကို ကပျြ ၅ သိနျး နှငျ့ နရောအလိုကျ အကောငျးဆုံး အားကစားသမားဆုမြားကိုလညျး ခြီးမွှငျ့သှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အသကျ(၂၁)နှဈအောကျ ရပျကှကျ/ကြေးရှာပေါငျးစုံ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးဖလား ဘောလုံးပွိုငျပှဲဖှငျ့ပှဲသို့ ပအိုဝျးကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေဦးစီးအဖှဲ့ဝငျမြား၊ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျဦးခှနျမောငျဖွူ၊ ဟိုပုံးမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးနနျးတငျ့နှငျ့ ဌာနဆိုငျရာတာဝနျရှိသူမြား၊ ကနျြးမာရေး၊ကွကျခွနေီ၊ ပွိုငျပှဲဝငျ အားကစားသမားမြား၊ အားကစားဝါသနာရှငျမြားနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျမှ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွကာ၊ ဖှငျ့ပှဲအခမျး အနားတှငျ ဟိုပုံးမွို့နယျပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနနှငျ့ အမှတျ(၂)အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျးမှ ကြောငျးသား/ကြောငျးသူ မြားတိျု့က အာရှမွနျမာ တေးသီခငျြးဖွငျ့လညျးကောငျး၊ အမှတျ(၂)အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျးမှ ဘငျခရာတပျဖှဲ့ မှ သရုပျပွ ကပွဖြျောဖွပေေးသှားပွီး၊ ကပွဖြျောဖွသှေားသညျ့ အဖှဲ့မြားအား မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးဦးနနျးတငျ့က ဂုဏျပွု လကျဆောငျပေးအပျခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ ရှမျးပွညျနယျ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျမှ ပွိုငျပှဲတှငျ အသုံးပွုနိုငျရေးအတှကျ ဘောလုံးမြား ပေးအပျခဲ့ပွီး ပှဲစဉျ(၁)အဖွဈလှယျအှနျ့ကြေးရှာအုပျစုဘောလုံးအသငျးနှငျ့ တောငျရပျကှကျ (၂) ဘောလုံးအသငျးတို့ ယဉျပွိုငျကစားကွရာ တောငျရပျကှကျ(၂)ဘောလုံး အသငျးက လှယျအှနျ့ကြေးရှာအုပျစုဘောလုံးအသငျးကို ၃ ဂိုး ဂိုးမရှိဖွငျ့ အနိုငျရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဟိုပုံးမွို့နယျမှ မွနျမာ့လကျရှေးစငျဂိုးသမား မွဖူးငုံ၊ မွနျမာနရှေငျနယျလိဂျ (U-19) ပွိုငျပှဲ Shan United ဘောလုံးအသငျးတှငျ ခှနျအောငျနိုငျ၊ မွနျမာနိုငျငံတက်ကသိုလျလကျရှေးစငျ ခှနျဝငျးဗိုလျနှငျ့ ဈိုငျးဇှဲဆကျ ၊ (U-15) အမြိုးသမီးမွနျမာ့လကျရှေးစငျ နနျးခြိုမှေး၊ (U-13) ရှမျး/တောငျ အမြိုးသမီးအသငျးတှငျ နနျးအောငျဖူးတို့ကို မှေးထုတျပေးနိုငျခဲ့ပွီးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
Tags # ရှမျးတောငျသတငျးမြား # ဟိုပုံး # အားကစား
Tags ရှမျးတောငျသတငျးမြား, ဟိုပုံး, အားကစား
အောငျပနျးတှငျ လြှပျစဈမီတာဘောကျ ဝါယာကွိုး အပူလှနျကဲရာမှ နအေိမျ မီးလောငျမှု ဖွဈပှား
ခှနျသနျးအောငျ . ကလောမွို့နယျ၊ အောငျပနျးမွို့၊ ညောငျပငျထောငျရပျကှကျ၊ နယျမွေ(၃)၊ စိနျပနျးလမျး၌ စကျတငျဘာလ ၁၄ ရကျ၊ နံနကျ အစောပိုငျးတှငျ လ...
တောငျကွီးမွို့မဈေးအတှငျးရှိ ဆိုငျခနျးအခြို့ အရောငျးအဝယျပါး သဖွငျ့ ယာယီ ပိတျသိမျးထား
အောငျဆနျးဝငျး . တောငျကွီးမွို့၏ အဓိက အခကျြအခြာဖွဈသညျ့ မွို့မဈေးအတှငျး အရောငျး အဝယျ နညျးပါးလာသဖွငျ့ ဈေးဆိုငျ ခနျးအခြို့ ယာယီ ပိတျသ...
Archive Sep 20 (9) Sep 19 (12) Sep 18 (14) Sep 17 (12) Sep 16 (14) Sep 15 (12) Sep 14 (15) Sep 13 (16) Sep 12 (16) Sep 11 (12) Sep 10 (9) Sep 09 (14) Sep 08 (15) Sep 07 (11) Sep 06 (12) Sep 05 (18) Sep 04 (12) Sep 03 (14) Sep 02 (14) Sep 01 (13) Aug 31 (11) Aug 30 (11) Aug 29 (13) Aug 28 (15) Aug 27 (12) Aug 26 (17) Aug 25 (13) Aug 24 (16) Aug 23 (16) Aug 22 (8) Aug 21 (15) Aug 20 (11) Aug 19 (15) Aug 18 (11) Aug 17 (11) Aug 16 (6) Aug 15 (7) Aug 14 (12) Aug 13 (14) Aug 12 (16) Aug 11 (12) Aug 10 (10) Aug 09 (16) Aug 08 (11) Aug 07 (8) Aug 06 (12) Aug 05 (16) Aug 04 (13) Aug 03 (9) Aug 02 (6) Aug 01 (11) Jul 31 (8) Jul 30 (10) Jul 29 (11) Jul 28 (13) Jul 27 (12) Jul 26 (15) Jul 25 (13) Jul 24 (14) Jul 23 (11) Jul 22 (12) Jul 21 (12) Jul 20 (12) Jul 19 (8) Jul 18 (9) Jul 17 (9) Jul 16 (7) Jul 15 (16) Jul 14 (9) Jul 13 (13) Jul 12 (8) Jul 11 (9) Jul 10 (14) Jul 09 (13) Jul 08 (16) Jul 07 (12) Jul 06 (12) Jul 05 (10) Jul 04 (11) Jul 03 (10) Jul 02 (17) Jul 01 (16) Jun 30 (12) Jun 29 (14) Jun 28 (9) Jun 27 (10) Jun 26 (8) Jun 25 (12) Jun 24 (13) Jun 23 (19) Jun 22 (7) Jun 21 (14) Jun 20 (10) Jun 19 (16) Jun 18 (11) Jun 17 (14) Jun 16 (12) Jun 15 (10) Jun 14 (10) Jun 13 (9) Jun 12 (8) Jun 11 (10) Jun 10 (14) Jun 09 (13) Jun 08 (10) Jun 07 (6) Jun 05 (15) Jun 04 (10) Jun 03 (9) Jun 02 (10) Jun 01 (8) May 31 (11) May 30 (11) May 29 (12) May 28 (10) May 27 (15) May 26 (10) May 25 (16) May 24 (7) May 23 (17) May 22 (6) May 21 (8) May 20 (4) May 19 (13) May 18 (13) May 17 (15) May 16 (16) May 15 (12) May 14 (9) May 13 (9) May 12 (12) May 11 (12) May 10 (9) May 09 (12) May 08 (12) May 07 (16) May 06 (11) May 05 (11) May 04 (8) May 03 (14) May 02 (12) May 01 (13) Apr 30 (8) Apr 29 (13) Apr 28 (12) Apr 27 (10) Apr 26 (9) Apr 25 (8) Apr 24 (20) Apr 23 (10) Apr 22 (6) Apr 21 (11) Apr 20 (14) Apr 19 (17) Apr 18 (9) Apr 17 (12) Apr 16 (11) Apr 15 (11) Apr 14 (14) Apr 13 (17) Apr 12 (13) Apr 11 (16) Apr 10 (12) Apr 09 (8) Apr 08 (11) Apr 07 (11) Apr 06 (11) Apr 05 (4) Apr 04 (12) Apr 03 (9) Apr 02 (9) Apr 01 (11) Mar 31 (16) Mar 30 (15) Mar 29 (14) Mar 28 (15) Mar 27 (18) Mar 26 (17) Mar 25 (12) Mar 24 (13) Mar 23 (10) Mar 22 (8) Mar 21 (10) Mar 20 (13) Mar 19 (13) Mar 18 (9) Mar 17 (13) Mar 16 (9) Mar 15 (9) Mar 14 (7) Mar 13 (11) Mar 12 (14) Mar 11 (5) Mar 10 (8) Mar 09 (9) Mar 08 (7) Mar 07 (7) Mar 06 (15) Mar 05 (10) Mar 04 (6) Mar 03 (5) Mar 02 (8) Mar 01 (8) Feb 29 (5) Feb 28 (9) Feb 27 (10) Feb 26 (7) Feb 25 (9) Feb 24 (10) Feb 23 (4) Feb 22 (8) Feb 21 (9) Feb 20 (10) Feb 19 (9) Feb 18 (8) Feb 17 (7) Feb 16 (7) Feb 15 (11) Feb 14 (8) Feb 13 (15) Feb 12 (1) Feb 11 (7) Feb 10 (12) Feb 09 (7) Feb 08 (3) Feb 07 (9) Feb 06 (9) Feb 05 (13) Feb 04 (4) Feb 03 (7) Feb 02 (12) Feb 01 (9) Jan 31 (10) Jan 30 (9) Jan 29 (11) Jan 28 (9) Jan 27 (8) Jan 26 (8) Jan 25 (5) Jan 24 (10) Jan 23 (11) Jan 22 (11) Jan 21 (11) Jan 20 (8) Jan 19 (6) Jan 18 (4) Jan 17 (5) Jan 16 (16) Jan 15 (11) Jan 14 (10) Jan 13 (10) Jan 12 (6) Jan 11 (8) Jan 10 (3) Jan 09 (6) Jan 08 (11) Jan 07 (2) Jan 06 (7) Jan 05 (8) Jan 04 (10) Jan 03 (10) Jan 02 (12) Jan 01 (11) Dec 31 (4) Dec 30 (8) Dec 29 (6) Dec 28 (10) Dec 27 (6) Dec 26 (11) Dec 25 (9) Dec 24 (7) Dec 23 (5) Dec 22 (4) Dec 21 (7) Dec 20 (10) Dec 19 (12) Dec 18 (6) Dec 17 (3) Dec 16 (11) Dec 15 (11) Dec 14 (12) Dec 13 (10) Dec 12 (1) Dec 11 (8) Dec 10 (6) Dec 09 (4) Dec 08 (6) Dec 07 (7) Dec 06 (11) Dec 05 (11) Dec 04 (9) Dec 03 (7) Dec 02 (5) Dec 01 (4) Nov 30 (7) Nov 29 (10) Nov 28 (9) Nov 27 (7) Nov 26 (6) Nov 25 (5) Nov 24 (7) Nov 23 (6) Nov 22 (8) Nov 21 (8) Nov 20 (7) Nov 19 (3) Nov 18 (5) Nov 17 (7) Nov 16 (6) Nov 15 (5) Nov 14 (6) Nov 13 (6) Nov 11 (1) Nov 10 (1) Nov 09 (6) Nov 08 (8) Nov 07 (4) Nov 06 (4) Nov 05 (3) Nov 04 (4) Nov 03 (5) Nov 02 (2) Nov 01 (5) Oct 31 (7) Oct 30 (6) Oct 29 (4) Oct 28 (3) Oct 27 (8) Oct 26 (4) Oct 25 (5) Oct 24 (13) Oct 23 (6) Oct 22 (7) Oct 21 (1) Oct 20 (7) Oct 19 (6) Oct 18 (9) Oct 17 (5) Oct 16 (5) Oct 15 (2) Oct 14 (6) Oct 13 (9) Oct 12 (3) Oct 11 (7) Oct 10 (7) Oct 09 (11) Oct 08 (7) Oct 07 (6) Oct 06 (2) Oct 05 (9) Oct 04 (5) Oct 03 (14) Oct 02 (8) Oct 01 (9) Sep 30 (4) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 25 (15) Sep 24 (9) Sep 23 (3) Sep 22 (6) Sep 21 (10) Sep 20 (10) Sep 19 (9) Sep 18 (10) Sep 17 (7) Sep 16 (5) Sep 15 (7) Sep 14 (10) Sep 13 (8) Sep 12 (10) Sep 11 (10) Sep 10 (9) Sep 09 (5) Sep 08 (9) Sep 07 (7) Sep 06 (8) Sep 05 (12) Sep 04 (11) Sep 03 (8) Sep 02 (4) Sep 01 (4) Aug 31 (8) Aug 30 (9) Aug 29 (12) Aug 28 (11) Aug 27 (8) Aug 26 (9) Aug 25 (8) Aug 24 (9) Aug 23 (9) Aug 22 (15) Aug 21 (7) Aug 20 (6) Aug 19 (6) Aug 18 (13) Aug 17 (8) Aug 16 (11) Aug 15 (2) Aug 14 (7) Aug 13 (4) Aug 12 (8) Aug 11 (7) Aug 10 (9) Aug 09 (7) Aug 08 (10) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (8) Aug 04 (8) Aug 03 (7) Aug 02 (12) Aug 01 (15) Jul 31 (6) Jul 30 (12) Jul 29 (6) Jul 28 (11) Jul 27 (10) Jul 26 (13) Jul 25 (13) Jul 24 (11) Jul 23 (9) Jul 22 (5) Jul 21 (14) Jul 20 (15) Jul 19 (11) Jul 18 (8) Jul 17 (9) Jul 16 (9) Jul 15 (10) Jul 14 (12) Jul 13 (11) Jul 12 (13) Jul 11 (13) Jul 10 (6) Jul 09 (3) Jul 08 (4) Jul 07 (6) Jul 06 (8) Jul 05 (7) Jul 04 (4) Jul 03 (5) Jul 02 (3) Jul 01 (2) Jun 28 (3) Jun 27 (8) Jun 26 (5) Jun 25 (6) Jun 24 (4) Jun 23 (5) Jun 22 (2) Jun 21 (6) Jun 20 (10) Jun 19 (8) Jun 18 (10) Jun 17 (2) Jun 15 (6) Jun 14 (2) Jun 13 (4) Jun 12 (5) Jun 11 (3) Jun 10 (4) Jun 08 (5) Jun 07 (7) Jun 06 (5) Jun 05 (3) Jun 04 (3) Jun 03 (5) Jun 02 (3) May 31 (4) May 30 (10) May 29 (8) May 28 (7) May 27 (2) May 26 (1) May 25 (5) May 24 (5) May 23 (7) May 22 (6) May 21 (5) May 19 (4) May 18 (13) May 17 (3) May 16 (9) May 15 (10) May 14 (7) May 13 (6) May 12 (5) May 11 (7) May 10 (1) May 09 (5) May 08 (3) May 07 (5) May 06 (5) May 05 (6) May 04 (4) May 03 (3) May 02 (9) May 01 (9) Apr 30 (7) Apr 29 (7) Apr 28 (3) Apr 27 (7) Apr 26 (9) Apr 25 (10) Apr 24 (7) Apr 23 (1) Apr 22 (8) Apr 21 (4) Apr 20 (3) Apr 19 (4) Apr 18 (7) Apr 17 (7) Apr 15 (6) Apr 14 (2) Apr 13 (5) Apr 12 (5) Apr 11 (8) Apr 10 (7) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (1) Apr 06 (7) Apr 05 (6) Apr 04 (9) Apr 03 (6) Apr 02 (8) Mar 31 (6) Mar 30 (5) Mar 29 (7) Mar 28 (8) Mar 27 (7) Mar 26 (11) Mar 25 (6) Mar 24 (4) Mar 23 (9) Mar 22 (4) Mar 21 (4) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (6) Mar 17 (4) Mar 16 (5) Mar 15 (12) Mar 14 (11) Mar 13 (8) Mar 12 (5) Mar 11 (10) Mar 10 (4) Mar 09 (11) Mar 08 (8) Mar 07 (13) Mar 06 (3) Mar 05 (4) Mar 04 (6) Mar 03 (1) Mar 02 (2) Mar 01 (10) Feb 28 (11) Feb 26 (5) Feb 25 (5) Feb 24 (11) Feb 23 (2) Feb 22 (9) Feb 21 (4) Feb 20 (4) Feb 19 (4) Feb 18 (3) Feb 17 (7) Feb 16 (11) Feb 15 (5) Feb 14 (8) Feb 13 (12) Feb 12 (8) Feb 11 (8) Feb 10 (1) Feb 09 (8) Feb 08 (9) Feb 07 (10) Feb 06 (11) Feb 05 (7) Feb 04 (8) Feb 03 (4) Feb 02 (9) Feb 01 (6) Jan 31 (8) Jan 30 (6) Jan 29 (4) Jan 28 (6) Jan 27 (5) Jan 26 (6) Jan 25 (6) Jan 24 (14) Jan 23 (9) Jan 22 (7) Jan 21 (5) Jan 20 (6) Jan 19 (12) Jan 18 (9) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (5) Jan 14 (6) Jan 13 (4) Jan 12 (5) Jan 11 (9) Jan 10 (10) Jan 09 (6) Jan 08 (6) Jan 07 (7) Jan 06 (6) Jan 05 (7) Jan 04 (8) Jan 03 (12) Jan 02 (11) Dec 31 (13) Dec 30 (8) Dec 29 (10) Dec 28 (7) Dec 27 (11) Dec 26 (3) Dec 25 (10) Dec 24 (14) Dec 23 (5) Dec 22 (7) Dec 21 (7) Dec 20 (9) Dec 19 (7) Dec 18 (5) Dec 17 (7) Dec 16 (3) Dec 15 (6) Dec 14 (12) Dec 13 (10) Dec 12 (7) Dec 11 (17) Dec 10 (12) Dec 09 (5) Dec 08 (6) Dec 07 (10) Dec 06 (14) Dec 05 (8) Dec 04 (5) Dec 03 (10) Dec 02 (6) Dec 01 (11) Nov 30 (10) Nov 29 (8) Nov 28 (12) Nov 27 (2) Nov 26 (8) Nov 25 (5) Nov 24 (5) Nov 23 (4) Nov 22 (1) Nov 21 (18) Nov 20 (10) Nov 19 (8) Nov 18 (2) Nov 17 (8) Nov 16 (17) Nov 15 (11) Nov 14 (5) Nov 13 (2) Nov 12 (3) Nov 11 (9) Nov 10 (15) Nov 09 (12) Nov 08 (5) Nov 07 (3) Nov 06 (5) Nov 05 (6) Nov 04 (2) Nov 03 (8) Nov 02 (7) Nov 01 (8) Oct 30 (9) Oct 29 (10) Oct 28 (7) Oct 27 (8) Oct 26 (10) Oct 25 (3) Oct 24 (5) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (3) Oct 20 (5) Oct 19 (4) Oct 18 (12) Oct 17 (5) Oct 16 (11) Oct 15 (8) Oct 14 (5) Oct 13 (10) Oct 12 (12) Oct 11 (13) Oct 10 (3) Oct 09 (7) Oct 08 (5) Oct 07 (4) Oct 06 (3) Oct 05 (6) Oct 04 (16) Oct 03 (4) Oct 02 (6) Oct 01 (6) Sep 30 (2) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 26 (9) Sep 25 (9) Sep 24 (6) Sep 23 (4) Sep 22 (10) Sep 21 (4) Sep 20 (5) Sep 19 (14) Sep 18 (13) Sep 17 (10) Sep 15 (1) Sep 14 (9) Sep 13 (1) Sep 12 (9) Sep 11 (5) Sep 10 (6) Sep 09 (5) Sep 08 (6) Sep 07 (8) Sep 06 (8) Sep 05 (6) Sep 04 (8) Sep 03 (10) Sep 02 (4) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (9) Aug 29 (11) Aug 28 (4) Aug 27 (7) Aug 26 (4) Aug 25 (6) Aug 24 (7) Aug 23 (10) Aug 22 (10) Aug 21 (8) Aug 20 (6) Aug 19 (8) Aug 18 (9) Aug 17 (16) Aug 16 (10) Aug 15 (1) Aug 14 (9) Aug 13 (6) Aug 12 (5) Aug 11 (12) Aug 10 (13) Aug 09 (16) Aug 08 (6) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (9) Aug 04 (13) Aug 03 (11) Aug 02 (15) Aug 01 (8) Jul 31 (7) Jul 30 (3) Jul 29 (8) Jul 28 (12) Jul 27 (10) Jul 26 (14) Jul 25 (7) Jul 24 (5) Jul 23 (7) Jul 22 (5) Jul 21 (12) Jul 20 (12) Jul 19 (5) Jul 18 (6) Jul 17 (4) Jul 16 (9) Jul 15 (1) Jul 14 (3) Jul 13 (5) Jul 12 (13) Jul 11 (6) Jul 10 (5) Jul 09 (10) Jul 08 (3) Jul 07 (13) Jul 06 (12) Jul 05 (13) Jul 03 (12) Jul 02 (5) Jun 30 (11) Jun 29 (9) Jun 28 (13) Jun 27 (2) Jun 26 (1) Jun 25 (7) Jun 24 (6) Jun 23 (12) Jun 22 (12) Jun 21 (15) Jun 20 (6) Jun 19 (3) Jun 18 (10) Jun 17 (4) Jun 16 (5) Jun 15 (8) Jun 14 (12) Jun 13 (9) Jun 12 (4) Jun 11 (8) Jun 10 (4) Jun 09 (7) Jun 08 (17) Jun 07 (13) Jun 06 (9) Jun 05 (8) Jun 04 (5) Jun 03 (5) Jun 02 (6) Jun 01 (10) May 31 (6) May 30 (4) May 28 (13) May 26 (7) May 25 (3) May 24 (8) May 23 (8) May 22 (10) May 21 (6) May 20 (6) May 19 (6) May 18 (7) May 17 (16) May 16 (8) May 15 (10) May 14 (10) May 13 (7) May 12 (7) May 11 (6) May 10 (15) May 09 (7) May 08 (11) May 07 (4) May 06 (5) May 05 (4) May 04 (6) May 03 (13) May 02 (5) May 01 (5) Apr 30 (19) Apr 29 (4) Apr 28 (8) Apr 27 (8) Apr 26 (14) Apr 25 (6) Apr 24 (11) Apr 23 (9) Apr 22 (3) Apr 21 (4) Apr 20 (7) Apr 19 (9) Apr 17 (5) Apr 16 (1) Apr 14 (3) Apr 13 (7) Apr 12 (11) Apr 11 (6) Apr 10 (10) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (7) Apr 06 (8) Apr 05 (11) Apr 04 (11) Apr 03 (9) Apr 02 (7) Apr 01 (6) Mar 31 (8) Mar 30 (11) Mar 29 (8) Mar 28 (11) Mar 27 (9) Mar 26 (8) Mar 25 (6) Mar 24 (8) Mar 23 (15) Mar 22 (8) Mar 21 (7) Mar 20 (11) Mar 19 (11) Mar 18 (5) Mar 17 (9) Mar 16 (15) Mar 15 (12) Mar 14 (10) Mar 13 (15) Mar 12 (8) Mar 11 (5) Mar 10 (13) Mar 09 (6) Mar 08 (13) Mar 07 (10) Mar 06 (11) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (9) Mar 01 (6) Feb 28 (11) Feb 27 (15) Feb 26 (14) Feb 25 (4) Feb 24 (10) Feb 23 (9) Feb 22 (14) Feb 21 (11) Feb 20 (16) Feb 19 (11) Feb 18 (6) Feb 17 (10) Feb 16 (13) Feb 15 (14) Feb 14 (9) Feb 13 (12) Feb 12 (11) Feb 11 (7) Feb 10 (8) Feb 09 (10) Feb 08 (15) Feb 07 (11) Feb 06 (6) Feb 05 (5) Feb 04 (6) Feb 03 (4) Feb 02 (7) Feb 01 (10) Jan 31 (9) Jan 30 (4) Jan 29 (8) Jan 27 (10) Jan 26 (11) Jan 25 (9) Jan 24 (7) Jan 23 (9) Jan 22 (8) Jan 21 (5) Jan 20 (8) Jan 19 (6) Jan 18 (10) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (15) Jan 14 (8) Jan 13 (6) Jan 12 (10) Jan 11 (11) Jan 10 (13) Jan 09 (9) Jan 08 (1) Jan 07 (5) Jan 06 (8) Jan 05 (9) Jan 04 (8) Jan 03 (8) Jan 02 (5) Jan 01 (8) Dec 31 (3) Dec 30 (4) Dec 29 (5) Dec 28 (4) Dec 27 (4) Dec 26 (6) Dec 25 (7) Dec 24 (4) Dec 23 (5) Dec 22 (10) Dec 21 (10) Dec 20 (6) Dec 19 (7) Dec 18 (8) Dec 17 (3) Dec 16 (9) Dec 15 (8) Dec 14 (10) Dec 13 (6) Dec 12 (10) Dec 11 (6) Dec 10 (7) Dec 09 (3) Dec 08 (5) Dec 07 (12) Dec 06 (10) Dec 05 (11) Dec 04 (6) Dec 03 (4) Dec 02 (9) Dec 01 (7) Nov 30 (9) Nov 29 (6) Nov 28 (5) Nov 27 (8) Nov 26 (6) Nov 25 (6) Nov 24 (10) Nov 23 (8) Nov 22 (10) Nov 21 (10) Nov 20 (7) Nov 19 (5) Nov 18 (7) Nov 17 (8) Nov 16 (14) Nov 15 (8) Nov 14 (9) Nov 13 (10) Nov 12 (7) Nov 11 (7) Nov 10 (10) Nov 09 (9) Nov 08 (7) Nov 07 (7) Nov 06 (6) Nov 05 (4) Nov 04 (6) Nov 03 (8) Nov 02 (8) Nov 01 (8) Oct 31 (7) Oct 30 (5) Oct 29 (6) Oct 28 (6) Oct 27 (8) Oct 26 (11) Oct 25 (7) Oct 24 (4) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (8) Oct 20 (8) Oct 19 (5) Oct 18 (5) Oct 17 (4) Oct 16 (7) Oct 15 (5) Oct 14 (4) Oct 13 (5) Oct 12 (10) Oct 11 (9) Oct 10 (5) Oct 09 (1) Oct 08 (5) Oct 07 (7) Oct 06 (6) Oct 05 (7) Oct 04 (5) Oct 03 (6) Oct 02 (5) Oct 01 (6) Sep 30 (4) Sep 29 (5) Sep 28 (1) Sep 27 (5) Sep 26 (11) Sep 25 (6) Sep 24 (4) Sep 23 (8) Sep 22 (6) Sep 21 (5) Sep 20 (6) Sep 19 (5) Sep 18 (9) Sep 17 (8) Sep 16 (6) Sep 15 (7) Sep 14 (9) Sep 13 (9) Sep 12 (10) Sep 11 (9) Sep 10 (5) Sep 09 (8) Sep 08 (10) Sep 07 (8) Sep 06 (10) Sep 05 (4) Sep 04 (10) Sep 03 (7) Sep 02 (7) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (8) Aug 29 (9) Aug 28 (10) Aug 27 (5) Aug 26 (3) Aug 25 (8) Aug 24 (8) Aug 23 (9) Aug 22 (8) Aug 21 (12) Aug 20 (8) Aug 19 (8) Aug 18 (10) Aug 17 (10) Aug 16 (10) Aug 15 (10) Aug 14 (12) Aug 13 (9) Aug 12 (9) Aug 11 (10) Aug 10 (13) Aug 09 (9) Aug 08 (13) Aug 07 (13) Aug 06 (3) Aug 05 (12) Aug 04 (11) Aug 03 (11) Aug 02 (10) Aug 01 (11) Jul 31 (11) Jul 30 (7) Jul 29 (9) Jul 28 (9) Jul 27 (10) Jul 26 (8) Jul 25 (10) Jul 24 (7) Jul 23 (6) Jul 22 (8) Jul 21 (10) Jul 20 (12) Jul 19 (6) Jul 18 (6) Jul 17 (8) Jul 16 (7) Jul 15 (10) Jul 14 (11) Jul 13 (12) Jul 12 (10) Jul 11 (8) Jul 10 (13) Jul 09 (1) Jul 08 (11) Jul 07 (9) Jul 06 (12) Jul 05 (9) Jul 04 (8) Jul 03 (7) Jul 02 (7) Jul 01 (7) Jun 30 (6) Jun 29 (8) Jun 28 (7) Jun 27 (11) Jun 26 (10) Jun 25 (10) Jun 24 (9) Jun 23 (13) Jun 22 (9) Jun 21 (9) Jun 20 (9) Jun 19 (10) Jun 18 (5) Jun 17 (12) Jun 16 (11) Jun 15 (14) Jun 14 (9) Jun 13 (13) Jun 12 (14) Jun 11 (10) Jun 10 (14) Jun 09 (10) Jun 08 (17) Jun 07 (10) Jun 06 (15) Jun 05 (11) Jun 04 (9) Jun 03 (11) Jun 02 (10) Jun 01 (16) May 31 (14) May 30 (13) May 29 (14) May 28 (9) May 27 (18) May 26 (16) May 25 (24) May 24 (10) May 23 (9) May 22 (16) May 21 (8) May 20 (9) May 19 (9) May 18 (10) May 17 (13) May 16 (12) May 15 (10) May 14 (8) May 13 (5) May 12 (10) May 11 (10) May 10 (14) May 09 (10) May 08 (7) May 07 (12) May 06 (6) May 05 (11) May 04 (14) May 03 (3) May 02 (13) May 01 (16) Apr 30 (7) Apr 29 (11) Apr 28 (10) Apr 27 (8) Apr 26 (11) Apr 25 (9) Apr 24 (7) Apr 23 (5) Apr 22 (8) Apr 21 (7) Apr 20 (10) Apr 19 (11) Apr 18 (9) Apr 17 (3) Apr 16 (5) Apr 15 (6) Apr 14 (7) Apr 13 (6) Apr 12 (12) Apr 11 (12) Apr 10 (11) Apr 09 (12) Apr 08 (11) Apr 07 (14) Apr 06 (12) Apr 05 (12) Apr 04 (13) Apr 03 (13) Apr 02 (8) Apr 01 (4) Mar 31 (8) Mar 30 (9) Mar 29 (12) Mar 28 (14) Mar 27 (20) Mar 26 (7) Mar 25 (14) Mar 24 (13) Mar 23 (15) Mar 22 (18) Mar 21 (12) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (12) Mar 17 (11) Mar 16 (14) Mar 15 (9) Mar 14 (15) Mar 13 (17) Mar 12 (10) Mar 11 (15) Mar 10 (9) Mar 09 (13) Mar 08 (12) Mar 07 (11) Mar 06 (16) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (12) Mar 02 (10) Mar 01 (6) Feb 28 (2) Feb 27 (4) Feb 26 (7) Feb 25 (3) Feb 24 (5)